सिजा पुग्नै पर्ने ठाउ हो ! - Bardiya Times
२०७७ पुष १४ गते, मंगलवार १८:२७ मा प्रकाशित
यतिखेर पर्यटनका क्षेत्र बिस्तार हुदै गएको छ । आफ्नो रुचि अनुसार पर्यटकहरुले यात्राको तय गर्न थालेका छन । कृषिमा रुचि राख्ने पर्यटकले कृषि पर्यटनको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न सक्ने छ भने यस्तै अरु ऐतिहासिकस्थल, तीर्थाटन, प्राकृतिक ताल तलैया, हिमाली भूभाग जस्ता क्षेत्रमा पनि आफ्नो रुचि र समय अनुसार पर्यटकहरु भ्रमण निस्कने गर्दछन । भ्रमण एउटा खुल्ला विश्वविद्यालय हो । कितावी ज्ञान भन्दा आफ्नै आखाँले देखेका कुराहरु भरपर्दो मानिन्छ । यात्रामा निस्कदा भरसक्य आफु पुग्ने ठाउको बारेमा पुस्तक, पत्रपत्रिका वा अरुकुनै माध्यमबाट जानकारी लिन सके राम्रो हुन्छ । पुग्ने ठाउको बारेमा जानकारी लिएर यात्रा गर्दा बास बस्ने ठाउ र यात्रामा बाटोमा पर्ने अन्य ठाउमा पनि अध्यन अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
जुम्लाको सिजामा पुग्नु भयो भने पर्यटकहरुको हात क्यामेरामा मात्र हुन्छ । वरिपरी पहाड, बीचमा समथर जमीन हेर्दैमा रमाइलो वातावरण गुजुमुजुक्क घरहरु र गाउँको छेउबाट बगिरहेको हिमा नदी । के–के को फोटो लिने ! एकैछिन पर्यटकहरु अलमलमा पर्दछन । नेपाली भाषाको उदगम थलो सिजाको प्राकृतिक स्वरुप वर्णन गरेरै सकिन्न । जुम्लाको सिंजा उपत्यकालाई नेपाली भाषाको उदगमस्थल मानिन्छ । त्यसैले नेपाली समाजमा सिंजा सभ्यताको छुट्टै र बिशिष्ट महत्व रहेको छ । जुम्ला सिंजाको उपत्यकामा रहेको सिंजा कनकासुन्दरी मन्दिर, पान्डव गुफा, बुढुमष्टा, कनकासुन्दरी नौधारा मन्दिर, बिराट दरबार, नाख्या दुला, ह्रयाङग्रा देवता मन्दिर, लेकपर लामा मन्दिर, बोतामालिका महादेव मन्दिरलगायत सिंजा भेगमा रहेका ३ दर्जन भन्दा बढी देवी देवताका मन्दिरहरु छन । प्राचीन सभ्यताका चिनारीहरु सिजा पुग्ने पर्यटकहरुले अध्यन अवलोकन गर्न पाउछन ।
तिब्बती भाषा अर्थात भोटे भाषामा सिजालाई ध्यात्से भनिन्छ । सिजाका शासकहरु सरङ्चोङ गोम्पोका सन्तान हुन । प्राचीन कालमा कर्णाली प्रदेशलाई ’स्वर्णप्रस्थ’ भनिन्थ्यो । एघारौँ शताब्दीको मध्यदेखि खोरल्देका पुत्र नागराज सुरुमा दानवभूतल त्यसपछि कुण्डल वनयारी र सिजा लामाथाडामा आई सिजा क्षेत्रलाई खस साम्राज्यको मुख्य केन्द्र बनाए । त्यसपछि सिजालाई’सपादलक्ष्य’ अर्थात सवा एक लाख गाउँ भएको भूमि भन्न थालीयो । जुम्लाको सिजा अहिले कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा पर्दछ । समग्र जुम्लालाई चारभेगमा बाडिएको छ । बोलीचालीमा ती भेगलाई असीभेग, चौधबिस भेग, पान्सय भेग र सिजा भेग भन्ने गरिन्छ । चारभेग अनुसार जुम्लाको सस्कृति, रितीरिवाज, बोलीचाली समेत फरक पाइन्छ ।
जुम्ला चारभागमा बाडिए जस्तै भूगोल पनि यसरी छुट्टीएको छ । राकम कर्णाली, भर्ता, महावु, ढिपु, गाग्रा दक्षिण पूर्वोत्तर र नाग्म, चुली मालिका, वुडु हुँदै पश्चिम उत्तर फैलिएका दुइटा पहाडको बिचमा जुम्ला पर्दछ । अको तर्फ नाग्म, रारालिही, चुलाकोट हुँदै डाँफेलेकतिर फैलिएको पहाडले सिंजा उपत्यका र चौघान उपत्यकालाई छुटयाई दिएको छ । अर्कोतिर कुँडारी, मालिका हुँदै गिरीदह पूर्वदक्षिण फैलिएको पहाडले भेरिखोला र तिला खोलाका बस्ती बसेको छ । त्यस्तै दान साँघुबाट तिर्खु हुँदै फैलिएको पहाडले चौधविस र गज्र्याङकोटलाई विभाजित गरिदिएको छ । यो बाहेक साना डाँडा, थुम्का र कोटले जुम्लाको बस्तीलाई भौगोलिक बिभाजन गराएको छ । जुम्लाका अधिकांश बस्तीहरु पहाडी भिरालोको दक्षिणी मोहोडामा हिमा नदी, तिला नदी, जवा नदी, भेरी खोला र गोरुखोलाका किनारमा रहेका छन । जुम्लामा गाउँ खेति योग्य जमिनमा नभई भिरालो पाखोमा केन्द्रीकृत भएका छन् । बस्ती विकास हेर्दा खेतियोग्य जमिनमैत्री रहेको पाइन्छ ।
सिजा जादा हवाइमार्ग होस वा कर्णाली राजमार्ग देखि जताबाट गएपनि जुम्ला बजारमा एक रात बस्न सके राम्रो हुन्छ । जुम्ला बजारमा पर्यटकहरुलाई खाना बस्न आफ्नो अनुकुल अनुसारको होटलहरु पाइन्छन् । तीन सय देखि हजार सम्म पर्ने कोठाहरु ननएटयाच देखि एटयाच बाथरुम सम्मका होटलहरु रहेका छन । जुम्ला बजारको एक दिनको बसाइमा पर्यटकहरुले ढुंगा, माटोले बनेका घरका बजार अवलोकन र चन्दनाथ मन्दिर को तीर्थाटन गर्न सकिन्छ । च्यांङग्राको सुकुटी रातो चामलको भात जौंको रोटी र सिमीको दाल चाखेपछि पर्यटकलाई छुट्टै आनन्द लाग्छ । हिमा नदीको किनारमा रहेको सिंजाको फाँट साह्रै लोभलाग्दो छ । वैशाख महिनामा सिजा पुग्ने पर्यटकहरुले फाँटभरि लगाएका जौ बालीले बयली खेलेको देख्न सक्दछन ।
सिंजामा हेर्नै पर्ने केही ऐतिहासिक ठाउँहरु छन् । कनकासुन्दरी देवीको मन्दिर सत्ययुगमा सतिदेवीको अंग पतन भएको मानिन्छ । माघ महिना जनै पुर्णिमा बडा दशैं र चैते दशैंमा कनकासुन्दरी देवीको मन्दिर तीर्थाटनको लागि मानिसहरुको भिड लाग्ने गर्दछ । अर्को तर्फ ऐतिहासिक खस राज्यको सिंजा दरबार क्षेत्र ढुंगे सिउबाक ढुंगे बाघ कालो सिउबाक दुध कुवा तेलकुवा हाटिसंजा शिवजीको मन्दिर सिजा पुगे पछि हेर्नै पर्ने ठाउँ हुन् । त्यससँगै एल आकारको कनक गुफा र शितलधारा देखि सेरा हुँदै लामाथाडा सम्म करिब ५ किलोमिटरको क्षेत्रमा मल्ल कालमा बिच्छयाइएको माटोका पाएपहरुले ऐतिहासिक कथाहरु बोकेको पर्यटकले अध्यन गर्न सक्दछन । रिपुमल्लको रन्जना लिपि बौद्ध लामाका माटाका मुर्तिहरु शिला स्तम्भहरु र ढुंगेदेवलहरु र मुग्राहरु पनि पर्यटकलाई लोभ्याउने ऐतिहासिक स्थल हुन ।
सिजा सस्कृति र पुरातात्विक हिसावले धनी मानिन्छ । हिमा नदीको किनारको सिंजा उपत्यका र खोला किनारमा रहेको साना ठूला फाट वेशीहरु उर्बर खेतीयोग्य जमिन मानिन्छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा पाण्डवगुफा, विराटदरवार, गरुडनुहानी, तिलिचौर माइ, भुलभुले पाटन, चुचेमारा लेक, कनकासुन्दरी लगायत बिभिन्न धार्मीक पर्यटकियस्थलहरु रहेका छन । त्यसै गरी पाँच भाई पाण्डव बस्ने पाण्डव गुफा र बिराटदरबारको अवषेश पनि सिजामा पर्यटकहरुले देख्न सक्दछन । सिजामा खस राज्यको समयमा बनाइएका मठ मन्दिर, सिजा सिहु बाघ, ठूला ठूला ढुङगामा कँुदिएका चित्रकला, संकेत अक्षर र अंकहरु लेखिएका शिला लेखहरु समेत हेर्न सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका विभिन्न धार्मिक सांकृतिक भेष भुषा त्यस्तैगरी, गुफा, मन्दिर, पन्चेबाजालगायत पुरातात्विक धरोहर हुन । सिंजा नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको जननी थलो भनेर परिचित छ । अझ भन्ने हो भने सिजालाई देउडा संस्कृतिको उदगम क्षेत्र पनि हो । मध्यकालमा सिंजा साम्राज्यको शीतकालीन राजधानी दुल्लु र ग्रीष्मकालीन राजधानी जुम्लाको सिंजामा थियो । जहाँबाट यहाँको राजनीतिक शासन व्यवस्था व्यस्थित रुपमा चलेको थियो ।
सिजा उपत्यकामा पर्ने विराटदरबार र पाण्डव गुफा पौराणिक प्रमाण हुन । पर्यटकहरुले सिजामा कुनै पर्व विशेषमा पुगे भने देउडा चाची ठाडीभाका झोडा मागल ढोली नाच ढाल नाच हुर्केनाच बालनाच जस्ता नाच समेत देख्न सक्दछन । ऐतिहासक यीनै सस्कृतीले जुम्लाको पहिचान गराएको छ । सिजाका मानिसहरु अति मेहनती हुन्छन । सिजाका मानिस ब्यापारको सिलसिला नेपालका धेरै जिल्लाहरुमा घुमन्ते ब्यापारीको रुपमा ब्यापार गर्दछन । हिङ देखि सिलाजित र सियो देखि राडी पाखी, लिउ,गलैचाको ब्यापारीको रुपमा जुम्लीहरुलाई बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले चिन्ने गर्दछन । जुम्लाका मानिसहरु पैदल हिडने दैलेख–सुर्खेतको मार्गनै प्रमुख मानिन्छ । तर पनि घोडा ब्यापारको लागी दाङ आउने जुम्लीहरु जुम्ला उपत्यकाको दक्षिण पट्टीको कुशेलेखको बाटो हुदै जाजरकोटको ढिमे, रुकुमको चौरजहारी र सल्यानको जिमाली लेखको बाटो हुदै दाङ आउने प्रचलन थियो ।
नेपालको बाइसे र चौविसे शासन कालमा जुम्ला सिजाका खस राजा जितारी मल्लले ३ पटकसम्म काडमाण्डु बिजय गरी करतिर्ने सम्झौतामा फर्केने मात्र हैन त्यसबेला सम्म पूर्बमा गण्डकी पश्चिममा नैनिताल उत्तरमा मानसरोवर र दक्षिणमा गडवाल सिमाना रहेको सिजाको कर्णाली साम्राज्य नेपाली इतिहासमा चर्चित छ । चार शताब्दितिर ताक्लाकोटमा स्थापना भएको राज्य ९ औं शताब्दिमा सिजा राजधानी सारेर १३ औं शताब्दिमा आएर राज्य बिस्तार गर्दै बिशाल साम्राज्य खडागरेको इतिहास छ । बिशाल साम्राज्यलाई ब्यवस्थित र परिचालन गर्न सिजा लामाथाडा, खाडाचक्र, र दुल्लु गरी ३ ठाउमा घुम्ती राजधानी चलाएको नेपाली भाषाको मूलथलो सिजा हो ।
प्राचीन कालमा हिमवत उत्तराखण्ड, बौदिक कालमा हिमाली खण्ड, पौराणीक कालमा कैलास सभ्यता अर्थात पर्वते र ऐतिहासिक कालमा सिजा साम्राज्यमा पर्ने कर्णाली नेपालको सम्पन्न र जेठो राज्यको क्षेत्र हो । आफ्नै भाषा, परम्परा, संष्कृति र सभ्यता भएको जुम्लाको सिजा कर्णालीको उच्चारण कन्नाली र करनाली भन्न रुचाउछन । कर्णाली नदीको उदगमस्थलबाट जडान र खसान क्षेत्रमा कर्णाली नदी आई पुग्दा कर्नाल बाजा मुखले बजाउदा कर्नालको ध्वनि जस्तो आवाज सुनिने भएकोले नदीकोे नाम कर्नाली भएको तथ्य सिजाबासी संग छ ।
सिजामा पर्यटकहरुले काली मार्सी चामलको भात खान पाउछन् । काली मार्सी सीमित मात्रामा उत्पादित हुने स्थानीय जातको धान हो । संसारमै सवैभन्दा उंचाई अर्थात समुन्द्र सतहबाट करीव ३ हजार मिटरसम्म उत्पादन हुने जुम्ली मार्सी धान जुम्लाको हावापानिमा मात्र हुने दुर्लभ प्रजातिको धान हो । यसको स्वाद, रोग र किराको प्रतिरोध गर्न सक्ने गुण र पोषक तत्वको कारण जुम्ली मार्सी धानको महत्व यतिखेर नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुगेको छ । जुम्लामा करीब ७०० वर्षअघि जुम्लीका इष्ट देवता चन्दननाथले भारतको काश्मिरबाट मार्सी भित्रायएको विश्वास गरिन्छ । किंवदन्ती अनुसार सुरुमा जुम्लामा कुनै पनि धान पाक्न सकेन । बाबा चन्दननाथले काश्मिरबाट धानको बीउ ल्याएर सुरुमा लाछु जिउरो अर्थात तातोपानी नजिकको गाउँ भन्ने ठाउमा रोपेका र पछि अरु किसानले पनि यसैगरी रोप्दै गएको भनाइ छ ।
जुम्लाको खलंगा वरपर र सिजा क्षेत्रमा कालीमार्सी धानको बीउ राख्ने काम हरेक बर्ष चैत १२ गते हुन्छ । बीउ राख्नुअघि धानलाई केलाउने, निफन्ने गरिन्छ र तामाको खडकुलो वा हण्डीमा धान भिजाएर राखिन्छ । चार दिनपछि अर्थात चैतको १६ गते भिजाएर राखिएको धानलाई निकालिन्छ । यसलाई पखालिन्छ र फेरुवा अर्थात उनको कपडामा सुकाएर ओभानो पारिन्छ । धान ओभानो भएपछि पानी छर्कने, फेरि सुकाउने ओभाएपछि पुन पानी छर्कने र साझँतिर घरभित्र चुल्हो नजिक रास बनाएर राखिन्छ । यसरी राखिएको धानको रासलाई तातोस भनेर सल्लाको झाँपो र कपडाले छोपेर राखिन्छ । बीउ नउम्रेसम्म बिहान बेलुकी चिसो पानी छम्किनुपर्छ । यसरी राखिएको धान कसैकोमा १९ गते, कसैकोमा २० गते उम्रन्छ । यदि २० भन्दा पर गएर २१–२२ गते उम्रेको भए त्यसलाई बासी बीउ भन्ने चलन छ । किनभने यसरी रास बनाएर राखिएको बीउलाई २० गतेका दिन ब्याडमा छर्ने काम हुन्छ । यसै दिन चेलीबेटीलाई बोलाएर देउडा नाच नचाइन्छ । यो दिनलाई विसुवा पर्व भन्ने गरिन्छ ।
बीउ छर्ने दिन भएकोले कसै कसैले यसलाई विच्छेती पर्व पनि भन्ने गर्दछन । चैत १२ गते काली मार्सीको बिउ भिजाउने, १६ गते उमार्ने र २० गते छर्ने दिनका रुपमा विसुवा पर्व मनाउने प्रचलन जुम्लामा छ । चैत २० गते ब्याडमा धानको बिउ छर्नु पुर्व त्यसको पुजा गरिन्छ । चामलको पीठोको पुवा बनाइन्छ र ब्याडको कान्लोमा ढुङगा ठडाइन्छ । बाबा चन्दननाथलाई सम्झेर पूजा गरिन्छ । घरमा चेलीबेटी बोलाएर खुवाने चलन पनि रहेको छ । काली मार्सी धान काटन विशेष दिन पारिन्छ । बुधबार या शुक्रबार पारेर मात्रै धान काटने परमपरा छ । जुम्लामा मार्सी धान रोप्ने बेलासम्म पनि विदेशिएको युवा घरमा नआए अब फर्केर कहिल्यै आउँदैन भन्ने किंवदन्ती पनि छ ।
जुम्ला जिल्लाको नामाकरण पौराणिक घटनासंग जोडिएको छ । सदरमुकाम खलगांमा रहेको स्वामी दत्तात्रेय मूर्तिलाई टोक्न दुईवटा अजिंगर नाग आएछन । नागले मूर्ती नजिक आउन नपाउदै स्वामी दत्तात्रेयको शक्तिले ती दुवै नागलाई भष्म गराइ दिनु भएछ । यसरी भष्म भएका ती नागहरु पछि जुम्ल्याहा पहाडको रुपमा देखिए छन । जुम्ल्याहा शब्दको अपभ्रंश हुदै ठाउको नाम पनि जुम्ला भएछ । पछि जिल्लाको नाम राख्नेबेला त्यसैलाई आधार मानी जुम्ला रहन गएको हो भन्ने जनविश्वास रहेको छ ।
कसरी जाने सिजा ?
सुर्खेतबाट कर्णाली राजमार्गको बांङ्गेसिमल बडडीचौर कल्यानकाँध तल्लो डुंगिसर हुँदै दैलेख र कालिकोटको सीमाना पर्ने टुनेबगर हुदै खिडकी जिउँला जिते दैखोला कालिकोटको सेरीघाट मान्मा बजार पिली सेराबाडा हुँदै कालिकोट र जुम्लाको सिमाना पर्ने नाग्मागाढमा पुगिन्छ । नाग्मागाढबाट कोइरेली, नाराकोट, गोठीज्युला हुदै करिव ३६ किलोमिटरको मोटरमार्गबाट सिजा पुगिन्छ । तपाइ नाग्माबाट जुम्ला बजार नपुगि सोझै सिंजा जान सक्नु हुन्छ । सिजा पुग्न जुम्लाको खलगा बजारबाट बसमा ५ घण्टा लाग्दछ भने जुम्लाबाट पैदल एक दिनमा पुगिन्छ ।
मिती ः– २०७७ पौष १३ गते दाङ